War Deg Deg Ah: Wareega Labaad ee Doorashada oo bilaabatay iyo Afar Musharax oo isku haya (Yaa ugu cad cad) - iftineducation.com
War Deg Deg Ah: Wareega Labaad ee Doorashada oo bilaabatay iyo Afar Musharax oo isku haya (Yaa ugu cad cad)
aadan21 / January 12, 2017
iftineducation.com – Waxaa Goordhaw bilaabatay codeynta Wareega labaad ee Doorashada Gudoomiye kuxigeenka koowaad iyo kan labaad ee Baarlamaanka Soomaaliya oo doorashdiisa ka socoto xarunta golaha Shacabka.
Wareega labaad ee Doorashada Gudoomiye kuxigeenka koowaad waxaa isugu soo haray Xildhibaan Cabdiweli Ibraahim Muudey iyo Xildhibaan Faarax Sheekh C/Qaadir oo iyagu helay codadkii ugu badnaa wareegii hore ee Doorashada.
Labadan Musharax waxaa dhax mari doona tartan aad u adag, waxaana inta badan la sadaalinayaa hadii aysan wax isbadalin in kursigaasi uu kusoo bixi doono Xildhibaan Cabdiweli Ibraahim Muudey oo ku horeeyay wareegii hore ee Doorashada.
Kursiga Labadaad ee Doorashada Gudoomiye kuxigeenka labaad ee Baarlamaanka waxaa iyana isugu soo haray labo Musharax oo kala ah Gudoomiye kuxigeenkii hore ee Baarlamaanka Xildhibaan Mahad Cabdalada Cawad iyo Xildhibaan C/Qaadir Bagdaadi.
Waxaa sidoo kale tartankan uu yahay mid adag oo isbadal uu ku imaan karo natiijadiisa, waxaana inta badan la saadaalinayaa in kursigan uu kusoo bixi dono Xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad oo wareegii hore ee tartankan ku horeeyay.
Wareegan ayaana noqon doona kan ugu dambeeya ee doorashada, waxaana lagu kala adkaan doonaa cod hal dheeri ah, iyadoona guusha raaci doonto Musharaxii hal cod dheeraada musharaxa kale ee la tartamaya.
Waxii kusoo kordha Doorashada si toos ah ugala soco Wararkayaga dambe Insha Allah
War Deg Deg Ah: Musharaxiin ka tanaasulay Doorashada Gudoomiye kuxigeenka 1-aad iyo kan labaad
War Deg Deg Ah :Doorashadii Gudoomiye kuxigeenka Koowaad oo lagu guuleestay (Yaa kusoo baxay)